DEG DEG-Eng Camey oo Furin Lagu Banneeyey iyo Labo Kamid ah Gudigii uu Magacaabay oo Iscasiley.
Puntlandnews (Garoowe)-Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhoweyd uu iska casilay xubinmadiisii gudida xalinta khilaafaadka ee uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland Nabadoon Khaliif Aw Cali oo kamid ahaa gudidaasi.
Nabadoon Khaliif oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu iska casilay xubintii uu kaga magacownaa gudidaasi, waana shakhsigii labaad ee iska casila gudidii uu magacaabay Cbadixakiin CabduullaaCamay.
Axmed Aadan Carab oo mar wasiir ku xigeen kasoo noqday xukuumaddii madaxweyne Cadde Muuse AUN sidoo kale gudoomiye gobol kasoo noqday gobolka Cayn ayaa maanta isna magaalada Garoowe kaga dhawaaqay in uu iska casilay kasii mid ahaan shaha gudida xalinta khilaafaadka ee madaxweyne ku xigeenku magacaabay maalin ka hor.
Axmed Aadan Carab ayaa iscasilaaddiisa u sababeeyey in aanan lagala tashan magacaabista xilkaasi iyo in uusan Camay xaq u lahayn magacaabista xubnaha gudida khilaafaadka Puntland.
Caymay calol ushaqayste xun dheh